အကြည်တော်စာအုပ်များ | ၀ိညာဉ်သစ်
by admin | Sep 5, 2008 | General |7comments
အကြည်တော်ရဲ့ စာအုပ်လေးတွေစုပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်က ရှိတဲ့စာအုပ်တွေရယ် နောက်ထပ်ဒေါင်းလုပ်ချတဲ့ စာအုပ်တွေပေါင်းပြီ အကုန်လုံးကို List လုပ်ပေးလိုက်ပါတ.်။ ကဲဗျာ.. အကြည်တော်ထုံးစံအတိုင်း စပြီးရီရအောင်ဗျာ.. ။ စာအုပ်လေးတွေကတော့ အောက်မှာပါ……..။
အကြည်တော် – မြစ်ပေါ်ထင်ကျန်ရစ်သောမြွေေ ခြရာများ (0ct 16,2008)
zenithstar	on September 14, 2008 at 2:35 pm	အကိုရဲ့ အကြည်တော်စုစည်းမှုမှာ ဘီလူးစာအုပ် မတွေ့တာနဲ့ ကျွန်တော့ဆီမှာရှိနေလို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အကိုဒေါင်းပြီး ပြန်ရှယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Reply	zenithstar	on September 15, 2008 at 2:46 pm	Why u deleted my comment ? I just shared book for you. You must not do like that. Although u wanna delete my comment, you should reply something about that.Firstly,i really appreciate your site. But now i need to change my view upon u r site.
Reply	zenithstar	on September 15, 2008 at 2:48 pm	Oops! sorry for my mistake. 😀 i dont know my comment is waiting for moderation. You can delete both these comments. Thanks
Reply	admin	on September 16, 2008 at 11:13 am	Sorry about that Zenithstar… I don’t know my comment setting is not allow to post directly … and these days i am busy with my classes so, i couldn’t check my site. Again I am really sorry for u r inconvenient. Also appreciated for your book and thanks for sharing.haveagreat day
Reply	thiha	on November 10, 2009 at 8:06 am	Thanks for the wonderful job u have done
Reply	ယုန်လေး	on January 3, 2010 at 3:44 am	အကို့ ရဲ့ အချို့စာအုပ်တွေကို Download လုပ်လို့ မရဘူး ကူညီပါအုံးနော်။ ကျွန်တော်က စာဖတ်ဝါသနာအရမ်းပါတယ်။ စာအုပ်တော်တော်များများလည်းဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က စာအုပ်တွေကို Download လုပ်ပြီး အိမ်မှာဖတ်ပါတယ်။ download လုပ်မရတော့ ဖတ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကူညီပါနော်။
Reply	AKKyaw	on October 2, 2011 at 11:46 am	တခုမှမရဘူး ! ဘယ်လိုဖတ်ရမှာလဲ ? ကူညီပါဦး ;(
Reply	SubmitaComment Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ကဏ္ဍအလိုက်ရှာဖွေရန်ကဏ္ဍအလိုက်ရှာဖွေရန်
Shout box Recent Commentshttp://pilulesenligne.men/ on ၀ိညာဉ်သစ် စာအုပ်စင်ရဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ရဲ့ ဖတ်သူများဆုံးစာအုပ် ၁၀ အုပ်http://edbehandlung.men/ on ကွန်ပြူတာ ဂျာနယ်များhttp://lapiluleduweekend.men/ on ကွန်ပြူတာနဲ့ သက်ဆိုင်သောhttp://edbehandlung.men/ on ကွန်ပြူတာနဲ့ သက်ဆိုင်သောhttp://pilulesenligne.men/ on နည်းပညာ စာအုပ်များ Facebook